Doorashada Maraykanka oo maraysa meel xasaasi ah. Faalo – XOGMAAL.COM
Mareykanka 6 maalin kadib oo ku beegan NOV 6, 2018, waxaa lagu wadaa iney ka qabsoonto mid kamida doorashooyinkii ugu xiisaha iyo xammaasadda badnaa ee taariikhda Mareykanka soo mara qarniyaal badan.
Codbixiyayaasha Gobolada Mareykanku waxay soo dooranayaan dhammaan 435 xubnood ee aqalka gollaha wakiilada Congresska, 35 kursi oo kamida aqalka odayaasha Mareykanka, 36 Gubaratoore Gobol iyo kummanaan kursiyoo kale kuwaaso loogu tartamaya doorashooyinka maxaliga ah ee heer gobol, heer degmo iyo heer waaxeed.
Dhammaan muwaadiniinta Mareykanka ee gaaray da’da codeynta oo ah 18 sano kuwaasoo is diiwaan geliyay ayaa ka qeyb galaya codbixinta.
Waxyaaaba xiisaha doorashadan u yeelaya ayaa ka imaanaya dhawr jihooyin oo kala duwan:
Koow, 2008dii markii Obama loo doortay aqalka cad waxa ay xisbigiisa Dimuquraadigu heysteen aqlabiyadda labada aqal ee Congresska Mareykanka – 60 kursi oo aqalka odayaasha ah iyo 257 kursi oo aqalka gollaha wakiilada ah. Nasiib darro, haatan waa looga badan yahay labada aqal ee Congresska. Aqalka sare ee Senate 48 kaliya ayay ka heystaan, halka aqalka hoose ay kaliya ka heystaan 194 kursi — waxayna si is daba joog ah u lumiyeen wadarta 76 kursi oo kala ah 12 Senate iyo 64 Wakiil.
2009kii, Madaxweyne Obama markii loo caleemo saaray aqalka cad xisbigiisu waxay maamulayeen dhammaan aqblabiyadda gollayaasha Baarlamaanka 27 Gobol. Sideed sano kadib, Dimuquraadigu waxay hoos ugu soo dhaceen 13 gobol oo kaliya. Sidoo kale, waxay lumiyeen 13 Gubaratoore iyo in ka badan 800 oo kuraas Baarlamaaniya tan iyo intii Obama madaxtinimada loo doortay, waa dhabar jabkii ugu baaxadda weynaa tan iyo wakkhtigii madaxweyne Dwight Eisenhower 1960kii.
Xisbiga Dimuquraadigu waxay ku dadaalayaan iney lasoo wareegaan aqlabiyadda labada aqal ee Congresska si ay u xakameeyaan siyaasadda qalafsan ee Madaxweyne Trump. Jamhuurigu, waxay ku adkeysanayaan iney xoojistaan hoggaaminta iyo aqlabiyadda labada aqal ee Baarlamaanka Mareykanka.
Dalalka caalamka ayaa qudhooda aad u daneynaya doorashada dhexe ee Mareykanka ka gadaal markii ay maamulka Trump isku fahmi waayeen heshiisyada ganacsiga xorta ah, arimaha socdaalka, xasilinta bariga dhexe, isbaddelka cimilada, amuuraha nukliyeerka Iiraan iyo heshiiska labada kuuriya.
Trump waxay isaga iyo xisbigiisa Jamhuurigu marayaan tijaabadii ugu horreysay ee siyaasadeed tan iyo intii uu la wareegay hoggaanka aqalka cad horraantii 2017-da.
Inta badan ra’yi aruurinta laga sameeyay madaxtinimada Trump ee ku aaddan hoggaamintiisa Mareykanka ayaa aad u hooseysa. Qiyaastii 60%, dadka ka qeyb galay ra’yi uruurinta way kasoo horjeesteen Trump – halka 36% ay taageersan yihiin sida lagu sheegay afti ay sameeyeen Washington Post iyo ABC News. Dhinaca kale, Shabakadda FiveThirtyEight ayaa shaacisay in 53% ay qaaddaceen siyaasadda iyo hoggaaminta Trump, halka 42% ay ku qanacsan yihiin.
Dhinaca dadka laga tirada badan yahay, sida madawga Mareykanka iyo Soomaalida ku nool mareykanka qudhooda waxay doorashadan u leedahay xiiso gaar ah. illaa iyo saddex musharax oo madoow ah, Dimuquraadina ah ayaa u sharaxan kuraasta saddex kamid ah Gubaratoorayaasha gobolada Dalkan Mareykanka.
Cod bixiyayaasha degmada 5d ee Congresska Goboka Minnesota, waxaa la filayaa in taariikhda markii ugu horreysay ay doortaan Rep. Ilham Omar oo labo sano ka hor loo doortay iney kamid noqoto Baarlamaanka maxaliga ee gobolka Minnesota. Ilhan sanadkaan waxay ku rajo weyn tahay iney baddeli doonto Mud. Keith Ellison oo kursigaas ku fadhiyay tan iyo 2007dii.
Waa muhiim in ruux walba oo heli kara fursadda codbixinta uu ka qeyb galo doorashada maadaama uu wadanku marayo xaalad aad khatar u ah, ayna muhiim tahay in dareenkaaga la maqlo.
AFEEF: Saaxibada Soomaaliya iyo dunida kale raali ahaada, todobaadkan waxay qoraaladeydu u badnaan doonaan U.S Midterm Elections. La socosho iyo aqoon guud kaliya haloo fahmo, xayaysiin iyo hawlo kale fadlan marnaba yaanan loo qaadan.
Qore Wariye Abdiqafar Shire.
israsaaseen ka dhacday waqooyiga Minneapolis.